wikiHow:Somali Language Project - wikiHow
wikiHow:Somali Language Project
Aayaha mustaqbalka ama muddada dheer ee wikiHow waa inuu udhiso qof walba oo caalamka ku nool hagayaal kharash-la'aan ah. Si aan taas u sameyno, waa inaan ku dhisno wikiHow luqado badan. Taas daraadeed, waxaan u baahannahay inaan wikiHow ku dhisno afaf badan. Habka aan u isticmaalno hawshaan waxaa lagu faahfaahiyay Qaabka Nidaamka Luqadda. Haatan luqadda Soomaaliga waxay ku jirtaa “marxaladda dhisidda” ee aan isku dayeyno inaan diiwaan galinno mutadawiciin nagu filan si aan udhisno wikiHow toos ah.
EditWaxaan U Baahannahay
Ugu yaraan hal mutadawic oo raba inuu noqdo xiriiriyaha qeybta Ingiriisiga iyo tan Af-Soomaaliga ee bulshada wikiHow. Qofkani waa inuu tifaftire ka ahaado qeybta Ingiriisiga oo aqoon u leh qaabka uu wikiHow u shaqeeyo. Shaqada xiriiriyaha waxay u baahan tahay inaad waqti badan ku bixisid, marka hawsha isxilsaar un haddaad rabtid.
Dhowr qofood oo tabaruc sameenaya oo ju talagalaya inay wax ku darsadaan wikiHow-ga cusub.
Dhowr mutadawiciin oo nagu caawin doona inaan faylka luqadda Ingiriisiga u badalno Af-Soomaali.
Dhowr mutadawiciin oo sameeya hagayaasha aasaasiga ah ee wikiHow-ga Af-Soomaaliga si ay tifaftirayaasha cusub si sahlan ubartaan waxay ku billaabi lahaayeen. Bogagga muhiimka ah sida Hagaha Qoraha iyo Macluumaad Ku Saabsan wikiHow waxay u baahan yihiin in la tarjumo.
EditDhisidda Koox Mutadawiciin Ah
Waxaannu u baahan nahay koox mutadawiciin ah oo ku talagalay in ay wax ku darsadaan wikiHow-ga luqaddan haddaanu dhisno. Si aad isu diiwaan galisid, ugu horreyn sameyso akoon kadibna saxiixaaga hoos ku saxiix adigoo qoraya ~ 4 jeer si ay u ekaato ~~~~
Magacaaga halkan ku qor intaad boggaan tifaftirtid kadibna waxaad qortaa ~~~~:
Abusalamovich 10:37, 4 December 2013 (UTC)
Elmi Abdul Haleem 10:51, 4 December 2013 (UTC)
Elmi 04:06, 30 December 2013 (UTC)
YuusufQarshe (talk) 09:43, 7 May 2014 (UTC)
Maktabadda Af Soomaaliga (talk) 18:33, 13 May 2014 (UTC)
Maktabadda (talk) 21:50, 26 January 2015 (UTC)
Markaan helno dad nagu filan iyo ugu yaraan hal xiriiriye oo tifaftire ka ah wikiHow-ga Ingiriisiga ayaan hore u socon doonnaa. Si aan hawshaan u boobsiinno waxaad ku fekertaa inaad xubnayaal cusub soo qortid. Haddaad su'aala leedahay waxaad email u dirtaa Jaak oo emailkiisu yahay wiki@wikihow.com waxaana madaxa farriinta ku dartaa erayga Jaak si aad uga gudubtid spam-miirka..